Maraykanka Oo cunqabateyn adag duldhigay dowladda Iiraan. – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Maraykanka Oo cunqabateyn adag duldhigay dowladda Iiraan.
On Nov 6, 2018 193 0
Dowladda Maraykanka ayaa cunaqabteyn horleh oo adag waxay duldhigtay dowladda shiicada ee Iiraan, taas oo siyaasad ahaan uu ismari waa xoogan kala dhexeeyo siyaasadaha Donald Trump.
Wasaaradda Keydka dowladda Maraykanka ayaa shaacisay maalintii shalay oo Isniin ahayd in cunaqabteyn horleh oo adag lagu soo rogay dowladda Iiraan, islamarkaana cunaqabateyntan ay saameyn doonto arimaha Shidaalka iyo Tamarta.
Inkabadan kun ruux oo ay ku jiraan shakhsiyaad Iiraaniyiin oo ganacsata ah ayay cunaqabateyntan saameyn ku yeelan doontaa, kuwaas oo dowladda Maraykanku sheegtay in la hakiyay tacaamulkeedii ganacsi ee ay la lahaayeen caalamka.
Dowladda Iiraan oo ka hadashay cunaqabateyntan ayaa sheegtay inaaney u dhutin doonin ficillada Donald Trump, waxayna sheegtay iney sii wadi doonto iibinta Nafta iyo iney u suuq geyso caalamka intiisa kale.
Ruuxaani; madaxweynaha Iiraan oo jeediyay kalimad cusub ayaa sheegay in dowladiisa ay ka adkaan doonto cunaqabateyntan lagu soo rogay, isagoona ugu laab qaboojiyay shacabkiisa inaaney saameyn doonin tallaabooyinka ay qaaday dowladda Maraykanka.
Sida ay sheegayaan khuburada dhanka dhaqaalaha iyo Istiraatiijiyada, majiri doonto saameyn xoog leh oo cunaqabateyntan ay ku yeelan doonto dowladda Iiraan, maadama dowlado badan oo Yurub ah ay sii wadan doonaan xiriirka dhaqaale ee ay la leeyihiin Iiraan.
Waxaa jirta sideed dowladood oo magacyadooda la filayo in goordhow lagu dhawaaqo, kuwaas oo u fasaxan iney soo iibsadaan shidaalka iyo Naftada ay soo saarto dowladda Iiraan, Turkiga ayaana rajeyneysa iney kamid noqoto dowladahaas.
Madax katirsan midowga Yurub ayaa la sheegay in Ruuxaani kula taliyeen inuu sabro inta yar ee uga harsan Trump xilka madaxtinimada, iyagoona ku sabarsiiyay iney u badantahay in Trump uusan ku guuleysan doorasho labaad.